Margaret Hilda Thatcher, Baroness Thatcher, (née Roberts; 13 Oktoobar 1925 - 8 Abriil 2013) waxay ahayd gabadh u dhalatay dalka Ingiriiska oo raysal wasaare ka soo noqotay Boqortooyada Ingiriiska sanadihii 1979 ilaa 1990 iyo Hogaamiyaha xisbiga muxaafidka ee 1975 ilaa 1990. Waxay ahayd raysal wasaarahii ingiriiska ee ugu waqtiga dheeraa ee qarnigii 20aad iyo haweeneydii ugu horeysay ee qabata xafiiskaas. Suxufiyad Soviet ah ayaa ugu magac dartay "Haweeneydii Birta ahayd", naaneystaas oo xiriir la yeelatay siyaasaddeeda aan tanaasulka lahayn iyo qaabkeeda hoggaamineed. Ra'iisul wasaare ahaan, waxay hirgelisay siyaasado caan ku ahaa Thatcherism.
Thatcher wuxuu cilmiga kimistariga ka bartay Somerville College, Oxford, wuxuuna si kooban ugu shaqeeyay cilmiga Kimistari, ka hor inta uusan noqon qareen. Waxaa loo doortay inay xubin ka noqoto baarlamaanka Finchley sanadkii 1959. Edward Heath wuxuu u magacaabay Xoghayeheeda Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska xukuumadiisii ​​1970-74. Sannadkii 1975-kii, waxay kaga adkaatay Heath doorashadii hoggaanka Xisbiga Muxaafidka si ay u noqoto Hoggaamiyaha Mucaaradka, haweeneydii ugu horreysay ee hoggaanka u qabata xisbi weyn oo siyaasadeed Boqortooyada Ingiriiska. Markii uu noqday Raiisel Wasaaraha kadib markuu ku guulaystay doorashadii guud ee 1979, Thatcher wuxuu soo saaray siyaasado dhaqaale oo taxane ah oo loogu talagalay in lagu badalo shaqo la'aanta badan iyo halgankii Ingiriiska ee dabayaaqadii Jiilaalkii Qanacsanaanta iyo hoos u dhaca dhaqaale ee socda. Falsafadeeda siyaasadeed iyo siyaasadeeda dhaqaale waxay xooga saartay xakamaynta (gaar ahaan qaybta maaliyadeed), suuqyada shaqada ee rogrogmi kara, shirkadaha gaarka loo leeyahay ee shirkadaha gaarka loo leeyahay, iyo yareynta awoodda iyo saamaynta ururada shaqaalaha. Caan ka noqoshadeedii sanadaha ugu horeeya ee ay xafiiska haysay ayaa hoos udhacday hoos udhac dhaqaale iyo shaqo la’aanta sii kordheysa, ilaa laga gaaray guushii Dagaalkii Falklands ee 1982 iyo dhaqaalaha soo kabashada ayaa keenay dib u soo nooleyn taageero, taasoo keentay in dib loogu noqdo doorashadii labaad ee 1983. Waxay ka badbaaday isku day dil oo ay fulisay Ku meelgaarka IRA qaraxii huteel Brighton ee 1984-kii waxayna guul siyaasadeed ka gaadhay Ururka Shaqaalaha Qaranka ee Shaqaalaha ee sanadihii 1984 - 1986 shaqo joojinta.
Thatcher ayaa mar seddexaad loo doortay mar labaad iyadoo mar labaad la jabiyay sanadkii 1987, laakiin taageeradeeda ku xigtay ee ku saabsan Xeerka Bulshada ("cashuuraha codbixinta") si weyn looma jeclayn, aragtiyadeeda sii kordheysa ee Eurosceptic ee ku aadan Bulshada Reer Yurubna lama wadaagin kuwa kale ee Golaha Wasiiradeeda. . Waxay iska casishay xilka madaxa dowladda iyo hogaamiyaha xisbiga bishii Nofeembar 1990, ka dib markii Michael Heseltine uu bilaabay caqabad ku ah hoggaankeeda. Kadib markii ay ka fariisatay Commons-ka sanadkii 1992, waxaa la siiyay nolol lagu wada noolaado sida Baroness Thatcher (oo ka tirsan Kesteven ee Gobolka ee Lincolnshire) oo xaq u siisay inay ku fariisato guriga sayidyada. Sanadkii 2013, waxay ugu dhimatay istaroog Hotel Ritz ee magaalada London, iyadoo jirta 87 sano.
In kasta oo shakhsiyan muran ka taagan yahay dhaqanka siyaasadeed ee Ingiriiska, Thatcher si kastaba ha noqotee waxaa si wanaagsan loogu eegay qiimeynta taariikheed ee ra'iisul-wasaarayaasha Ingiriiska. Muddadii ay xilka haysay waxay ka dhigan tahay dib-u-habeyn lagu sameeyo siyaasadaha neoliberal ee Boqortooyada Ingiriiska iyo doodda ku saabsan dhaxalka qalafsan ee Thatcherism ayaa sii socota illaa qarniga 21-aad.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Margaret_Thatcher&oldid=225028"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Nofeembar 2021, marka ee eheed 11:45.